သင့်လျော်သော shock absorber (coilover) ကိုရွေးချယ်နည်း
1. ထုတ်ကုန်သည် 2-3 လက်မ elevation လိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ အချို့သောထုတ်ကုန်များသည် အမြင့် ၂ လက်မသာရှိသည်။3လက်မ အမြင့်ကို အနည်းငယ်သာ အသုံးပြုပြီးနောက်၊ လမ်းကြမ်းတွင် ကန့်သတ်ချက်သို့ ဆွဲယူရန် လွယ်ကူပြီး ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသည်။
ဒုတိယ၊ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာ၏ဗဟိုမှန်ပြောင်းလှံ၏အချင်းသည် ခွန်အား၏အခြေခံညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည့် 16 မီလီမီတာထက်ပို၍ရောက်ရှိနိုင်မလား။
တတိယအချက်မှာ Shock absorber ၏ အပေါ်နှင့်အောက် ချိတ်ဆက်ထားသော လက်စွပ်များသည် ခိုင်ခံ့မြင့်မားသော polyurethane sleeves များဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် ရေရှည်ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားစေရန်အတွက် အရေးကြီးသော အခြေခံအချက်ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သာမန်ရော်ဘာသည် မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုအောက်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုရန်ခက်ခဲသောကြောင့်၊ .
shock absorber ကို အဓိကအားဖြင့် shock absorber နှင့် shock absorber နွေဦးမှ ပြန်တက်လာသောအခါ လမ်းမျက်နှာပြင်မှ ထိခိုက်မှုကို တားဆီးရန် အဓိကအသုံးပြုပါသည်။ မညီမညာသောလမ်းများပေါ်တွင် ဖြတ်သန်းသည့်အခါ၊ shock-absorbing spring သည် လမ်း၏တုန်ခါမှုကို စစ်ထုတ်နိုင်ပြီး၊ စပရိန်သည် သူ့အလိုလို ပြန်ဖြစ်သွားပြီး ဤ spring ၏ခုန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် shock absorber ကို အသုံးပြုပါသည်။ Shock absorber ပျော့လွန်းရင် ခန္ဓာကိုယ်က အပေါ်အောက် ခုန်တက်သွားပါလိမ့်မယ်။ Shock absorber သည် အလွန်မာကျောပါက၊ ၎င်းသည် အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး စပရိန်အား ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်မလုပ်စေရန် ကာကွယ်ပေးပါသည်။ Shi Xiaohui မှ ဆိုင်းထိန်းစနစ်အား ပြုပြင်မွမ်းမံရာတွင် hard shock absorber သည် hard spring နှင့် ကိုက်ညီသင့်ပြီး spring ၏ မာကျောမှုသည် ကား၏အလေးချိန်နှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေသောကြောင့် လေးလံသောကားများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုပြင်းထန်သော shock absorbers ကို အသုံးပြုကြသည်။ shock absorber နှင့် spring တို့၏ အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်မှုကို ဒီဇိုင်းဆွဲရန် ပြုပြင်မွမ်းမံစဉ်အတွင်း အဆက်မပြတ်ကြိုးစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုဆိုင်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကားပိုင်ရှင်အတွက် အကောင်းဆုံးကိုက်ညီမှုကို ရှာဖွေနိုင်သည်။
မော်တော်ယာဥ် ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာသည် ဆီယိုစိမ့်ပါက ရှော့တိုက်စုပ်ကိရိယာအတွက် အလွန်အန္တရာယ်များမည်မှာ သေချာပါသည်။ ထို့နောက် ဆီယိုစိမ့်မှု တွေ့ရှိပါက အချိန်မီ ပြန်လည် ကုစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဓိကစစ်ဆေးသည့်အရာများမှာ ဆီတံဆိပ်ကပ်ခြင်းများ၊ အလုံပိတ် gaskets ပေါက်ပြဲပျက်စီးခြင်းနှင့် ဆီသိုလှောင်မှုဆလင်ဒါခေါင်းများဖြစ်သည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများတွင် အခွံမာသီးများ ပါရှိခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
ဆီယိုစိမ့်မှုတွေ့ရှိပါက ဆလင်ဒါခေါင်းခွံကို ဦးစွာတင်းကျပ်ပါ။ Shock absorber ယိုစိမ့်နေသေးပါက ဆီတံနှင့် gasket သည် ပျက်စီးနိုင်ပြီး အကျုံးမဝင်ဘဲ တံဆိပ်အသစ်များကို အစားထိုးသင့်သည်။ ဆီယိုစိမ့်မှုကို မဖယ်ရှားနိုင်သေးပါက ပိုက်တံကို ဆွဲထုတ်ပါ။ ပိန်သွားခြင်း သို့မဟုတ် အလေးချိန် ပြောင်းလဲခြင်း ခံစားရပါက ပစ္စတင်နှင့် ဆလင်ဒါကြား ကွာဟချက် ကြီးမားခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ၊ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာ၏ ပစ္စတင် ချိတ်တံ ကွေးသွားခြင်း ရှိ၊ မျက်နှာပြင်နှင့် ဆလင်ဒါ။
ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာသည် ဆီယိုစိမ့်ခြင်းမရှိပါက၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုတ်ကျခြင်းတို့အတွက် ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာ ချိတ်ဆက်တံ၊ ချိတ်ဆက်တံ၊ ချိတ်ဆက်အပေါက်၊ အထက်ဖော်ပြပါစစ်ဆေးမှုများသည် ပုံမှန်ဖြစ်ပါက ပစ္စတင်နှင့်ဆလင်ဒါကြားရှိ ကွာဟချက် ကြီးမားခြင်းရှိမရှိ၊ ဆလင်ဒါအား တင်းမာမှုရှိမရှိ၊ အဆို့ရှင်အလုံပိတ်ထားခြင်းရှိမရှိ၊ valve clack နှင့် valve clack ရှိ၊ ထိုင်ခုံအား တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ချိတ်ထားပြီး တုန်ခါမှုစပရိန်သည် ပျော့လွန်းသည် သို့မဟုတ် ကွဲသည်ဖြစ်စေ အခြေအနေအရ အစိတ်အပိုင်းများကို ကြိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်းဖြင့် ပြုပြင်သင့်သည်။
ထို့အပြင်၊ shock absorber သည် အမှန်တကယ်အသုံးပြုရာတွင် ဆူညံသံချို့ယွင်းမှု ရှိနိုင်သည်။ ရှော့ခ်ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် မလုံလောက်သော သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်းများကြောင့် ဖြစ်ပါက အကြောင်းရင်းကို သိရှိပြီး ပြုပြင်ရမည်။
shock absorber ကို စစ်ဆေးပြီး ပြုပြင်ပြီးနောက်၊ စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးမှုကို အထူးစမ်းသပ်ခုံတန်းပေါ်တွင် ပြုလုပ်သင့်သည်။ ခုခံမှုအကြိမ်ရေ 100±1mm ဖြစ်သောအခါ၊ extension stroke နှင့် compression stroke တို့၏ ခံနိုင်ရည်သည် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသင့်ပါသည်။ ဆွဲဆန့် လေဖြတ်ခြင်း၏ အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ရည်မှာ 392~588N ဖြစ်သည်။ Dongfeng Motor ၏ extension stroke ၏အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ရည်မှာ 2450~3038N ဖြစ်ပြီး compression stroke ၏အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ရည်မှာ 490~686N ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုအခြေအနေမရှိပါက၊ ရှော့ခ်စုပ်လက်စွပ်၏အောက်ဘက်စွန်းကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရန် သံချောင်းကိုအသုံးပြု၍ ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာ၏အစွန်းနှစ်ဘက်ပေါ်တင်ကာ အပေါ်ဘက်လက်စွပ်ကို နှစ်ဖက်စလုံးဖြင့် ကိုင်ထားနိုင်သည်။ လက်ကို ၂-၄ ကြိမ် ခေါက်ဆွဲပါ။ အပေါ်ကိုဆွဲတဲ့အခါ ခံနိုင်ရည်က အားကောင်းပြီး အောက်ကို ဖိလိုက်တဲ့အခါ ပင်ပန်းတယ်လို့ ခံစားရမှာမဟုတ်သလို ပြုပြင်ခြင်းမပြုမီနဲ့ နှိုင်းယှဥ်တဲ့ ခံနိုင်ရည်က ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီး ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာဟာ အခြေခံအားဖြင့် ရှော့ခ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ညွှန်ပြတဲ့ အချည်းနှီးသော ခရီးသွားလာမှုလည်း မရှိပါဘူး။ ပုံမှန်
Shock absorber ၏ အစိတ်အပိုင်းများသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်၊ အထူးသဖြင့် oil seal အမှတ်တံဆိပ်၊ Max Auto သုံးသော NOK တံဆိပ် oil seal ၊ piston rod သည် chrome plating ဖြစ်သည်၊ ၎င်းကို သံချေးမတက်စေရန် လုံလောက်ကြောင်းသေချာစေရန်။
Sintered များသည် damping force တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် မြင့်မားသောတိကျမှုရှိပါသည်။
အာမခံ : Max Auto မှ ရောင်းချသော ရှော့တိုက် ၊ ကော်ဗာ များအားလုံးအတွက် 1 နှစ် အတွင်း ဆီယိုစိမ့်မှု ပြဿနာ ရှိပါက ရှော့ခ်ဘော်ဒီအား အခမဲ့ လဲလှယ်ပေးပါမည်။
Max Auto အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ထိုင်ဝမ်အမှတ်တံဆိပ်တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့သော သုံးစွဲသူတစ်ဦး ရှိသည်၊ ရလဒ်သည် Max Auto အရည်အသွေး ပိုကောင်းကြောင်း ပြသသည့် အရည်အသွေးကို ပြသသည်။